Tuesday January 19, 2016 - 20:24:40 in Local News by Sub Editor - Ayub Ismail
Ujeeddo: Magacaabid Duubka Duubyada Reer Maanyo Xaaji Kamaal Maki iyo
MagacaabidaXaaji Kamaal Maki Aweys waxey imaaneesaa ka dib marka uu ka geeriyooday xilkaasi alllah u naxariistee nabadoon Maxamed Ismaaciil Xaaji oo xilkaasi horey u haayay. Nabadoon Xaaji Kamaal Maki Aweys waa oday-dhaqan ee bulshada reer maanyo iyo odayaasha dhaqanka ey doorteen waana shaqsi u leh karti iyo aqoon ba in uu qabto xilkaasi.
Sidoo kale Golaha Odayaasha dhaqanka Qowmiyadda Beelaha Banaadiriga waxaa ay ugadigayaan wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Dowladda Federaalka Soomaaliya in ay kafeejignaato xildhibaano doonaya in ay wasaaradda si sharcidarro ah uga diiwaangeliyaan odayaal dhaqameed been abuur ah ama gacan ku rimis ah oo la doonayo in lagudiiwaangeliyo magaca golaha Odayaasha Dhaqanka Banaadiriga.
Waxaa wanaagsan wasaarada arimaha gudaha ineey ogaato in reer banaadir ay mideysan yihiin sidii horena aysan aheen oo indhahooda furan yahay. Dhaqanka soomaliya kama mid aha in siyaasi uu sameesto oday dhaqan ee waa in sidaan oo kale ee bulshada go’aan ka gaartaa iyo dhaqanka cidii hogaan dhaqameed u noqonlaheed.
Waxaan usheegeynaa Dowlada Somaliyed, Umada somaliyed iyo bulshada caalamka in xildhibaano gaar ah oo ka tirsan golaha barlamaanka oona hugsan awooda Dowlada ay si khaldan ugu tagrifalaayaan xaquuqda reer banaadir.
Waxaan halku dhig noo ah:-
Malaaqyo aa leenahay
Kala saar siyasada iyo dhaqanka
Oday been abuur ah marabno
5-beel halagu saleeyo doorashada 2016
Xildhibaanada faraha hakala baxaan dhaqanka